Umdibaniso we-DMP: Ishishini eliqhutywa yidatha labapapashi | Martech Zone
Umdibaniso we-DMP: Ishishini eliqhutywa yidatha labapapashi
NgoLwesihlanu, ngoJuni 12, 2020 NgoLwesihlanu, ngoJuni 12, 2020 Elena Podshuveit
Ukuncitshiswa okunamandla kokufumaneka kwedatha yomntu wesithathu kuthetha ukuba kunokwenzeka amathuba okujolisa ekuziphatheni kunye nokwehla kwingeniso yentengiso kubanini beendaba abaninzi. Ukucima ilahleko, abapapashi kufuneka bacinge ngeendlela ezintsha zokusondela kwidatha yomsebenzisi. Ukuqesha iqonga lolawulo lwedatha kunokuba yindlela yokuphuma.
Kule minyaka mibini izayo, intengiso yentengiso iza kukhupha ikuki yomntu wesithathu, eya kuguqula imodeli yesiko lokujolisa kubasebenzisi, ukulawula indawo zentengiso, kunye nokulandela umkhankaso.
Kwiwebhu, isabelo sabasebenzisi esichongiweyo ngekuki yomntu wesithathu siza kuhamba siye kwi-zero. Imodeli yesiko lokulandela umkhangeli wesiza esinqamlezayo ngabanikezeli beenkcukacha zomntu wesithathu kunye nabathengisi kungekudala kungekudala Ke, ukubaluleka kwedatha yeqela lokuqala kuya kuphakama. Abapapashi ngaphandle kobuchule babo bokuqokelela idatha baya kufumana iingxaki ezinkulu, ngelixa amashishini aqokelela amacandelo abo abasebenzisi abakwisimo esikhethekileyo sokufumana umvuzo wale ndawo intsha yentengiso.
Ukuqokelela kunye nokulawula idatha yeqela lokuqala kudala amathuba awodwa kubapapashi ekwandiseni umvuzo wabo, ukuphucula amava omxholo, ukuzibandakanya kunye nokwakha okulandelayo ngokunyaniseka. Ukuhambisa idatha yeqela lokuqala kunokusetyenziselwa umxholo kunye nokwenza imiyalezo yentengiso yokwazisa iiwebhusayithi.
I-Business Insider isebenzisa idatha yokuziphatha ukuphuhlisa iiprofayili zabafundi bayo kwaye isebenzise olo lwazi ukwenza iincwadana zeendaba ze-imeyile kunye neengcebiso zomxholo we-onsite ukubandakanya abafundi ngcono. Ezi nzame zonyusa intengiso yazo ngokucofa amaxabiso ngama-60% kunye nokunyusa amaxabiso okucofa kwiincwadana zabo ze-imeyile 150%.
Kutheni abapapashi befuna i-DMP
Ngoku ka Iinkcukacha manani zangaphakathi, kwi-avareji, I-12% yohlahlo lwabiwo-mali ichithwa ekufumaneni idatha yeqela lokuqala ekujoliseni abaphulaphuli. Ngokususwa kwe-cookies yomntu wesithathu, ibango ledatha liya kwanda ngokucacileyo, kwaye abapapashi abaqokelela idatha yeqela lokuqala bakwimeko efanelekileyo yokufumana inzuzo.
Nangona kunjalo, baya kufuna ukuthembeka iqonga lolawulo lwedatha (DMP) yokuphumeza imodeli yeshishini eliqhutywa yidatha. I-DMP iya kubavumela ukuba bangenise ngokufanelekileyo, bathumele ngaphandle, bahlalutye, kwaye, ekugqibeleni, benze imali ngedatha. Idatha yeqela lokuqala inokuqinisa uluhlu lweentengiso kunye nokubonelela ngomthombo ongezelelweyo wengeniso.
I-DMP Sebenzisa Ityala: iiSimples
I-Simpals yeyona ndlu inkulu yeendaba kwi-Intanethi eMoldova. Kwiphulo lokufumana imithombo yengeniso ethembekileyo, bona Isebenzisana ne-DMP ukuseta ukuqokelelwa kwedatha yeqela lokuqala kunye nohlalutyo lomsebenzisi lwe999.md, iqonga lezentengiso laseMoldavia. Ngenxa yoko, bachaza amacandelo abaphulaphuli angama-500 kwaye ngoku bazithengisa ngokwenkqubo kubathengisi nge-DMP.
Sebenzisa i-DMP kubonelela ngeengcombolo zedatha eyongezelelweyo kubathengisi, ngelixa ukonyusa umgangatho kunye ne-CPM yamagama abonelelweyo. Idatha igolide entsha. Makhe siqwalasele owona mba uphambili wokuququzelela idatha yabapapashi kunye nokukhetha umboneleli weetekhnoloji onokulingana iimfuno zeshishini zeentlobo ezahlukeneyo zabapapashi.
Uyilungiselela njani indibaniselwano ye-DMP?
Ukuqokelela idatha Okokuqala nokuphambili, abapapashi kufuneka baphonononge ngokuchanekileyo yonke ingqokelela yedatha kumaqonga abo. Oku kubandakanya ubhaliso kwiiwebhusayithi nakwizicelo zeselfowuni, ukungena kwiinethiwekhi ze-Wi-Fi, kunye nawo nawuphi na omnye umzekelo apho abasebenzisi bakhuthazwa ukuba bashiye idatha yobuqu. Nokuba ivelaphi idatha, ukuqokelelwa kwayo kunye nokugcinwa kwayo kufuneka kungqinelane nezakhelo zomthetho ezikhoyo ze GDPR kwaye I-CCPA. Ngalo lonke ixesha abapapashi beqokelela ulwazi lomntu siqu, kufuneka bafumane imvume kubasebenzisi, kwaye babashiye benethuba lokuphuma.
Ukulungiswa kwedatha -Ngaphambi kokungena kwi-DMP, kufuneka uyenze yonke idatha yakho, uyihambise kwifomathi enye, kwaye ususe iikopi. Ukulungiselela ukuseta ifomathi efanayo yedatha, kubalulekile ukuba ukhethe enye into eyahlukileyo, esekwe apho uya kuthi ubeke khona isiseko sedatha yakho. Khetha leyo inokuchonga ngokulula umsebenzisi, njengenombolo yefowuni okanye i-imeyile. Iya kukwenza lula ukudityaniswa ukuba wahlulahlulahlula idatha yakho ibe ngamacandelo ngokwabaphulaphuli abaqhuba kakuhle.
Uyidibanisa njani iDMP?
Enye yeendlela ezifanelekileyo zokuqhagamshela i-DMP kuku yidibanise neCRM ngokusebenzisa i-API, ukungqamanisa ii-UniqueIDs. Ukuba i-CRM yakho idityaniswe nazo zonke iiasethi zakho zedijithali, inokuhambisa idatha ngokuzenzekelayo kwi-DMP, enokuthi ityebise kwaye iyiphucule.
I-DMP ayigcini ulwazi oluchongiweyo lwabasebenzisi. Xa i-DMP idityanisiwe nge-API okanye ukungeniswa kwefayile, ifumana inyanda yedatha edibanisa i-ID yomshicileli kunye nesazisi somsebenzisi esikhethekileyo osichaze kwinyathelo elidlulileyo.
Ngokudityaniswa kweCRM, ungadlulisela idatha kwifomathi ye-hashed. I-DMP ayinakuyichaza le datha, kwaye iya kuyilawula kule fomathi ifihliweyo. I-DMP iqinisekisa ubumfihlo kunye nokhuseleko lwedatha yomsebenzisi, ukuba nje uphumeze ukungaziwa kunye nokubethela.
Yeyiphi imisebenzi ekufuneka yenziwe yi-DMP?
Ukukhetha eyona DMP kwishishini lakho, kufuneka uchaze iimfuno zakho zomboneleli wobuchwephesha. Okona kubaluleke kakhulu, kuya kufuneka udwelise lonke unxibelelwano oluyimfuneko lobuchwephesha.
I-DMP akufuneki iphazamise iinkqubo zakho kwaye kufuneka isebenze kwiziseko zophuhliso ezikhoyo. Umzekelo, ukuba sele uneqonga leCRM, i-CMS, kunye nokudityaniswa namaqabane ebango, i-DMP ekhethiweyo kufuneka ihambelane nayo yonke.
Ngelixa ukhetha i-DMP, qaphela zonke izakhono ezikhoyo zobugcisa, ukuze ukudityaniswa kungabi luxanduva kwiqela lakho lobuchwephesha. Udinga iqonga elinokuhambisa ngokufanelekileyo ukusebenza okuphambili: ukuqokelelwa, ukwahlulwahlulwa, uhlalutyo, kunye nokwenza imali kwedatha.
Umphathi weTag -Emva kokuba udibanise idatha yakho esele ikhona kwi-DMP yakho, kuyakufuneka uqokelele amanye amanqaku edatha. Ukwenza oko, kuya kufuneka usete iithegi okanye iipikseli kwiiwebhusayithi zakho. Le yimitya yekhowudi eqokelela idatha malunga nokuziphatha komsebenzisi kumaqonga akho emva koko uwarekhode kwi-DMP. Ukuba eyokugqibela ine Umphathi wethegiIya kuba nakho ukuphatha iithegi kumaqonga akho asembindini. Nangona unokukhetha, iya kulisindisa iqela lakho lobuchwephesha ixesha elininzi kunye nomzamo.
Ukwahlulahlula kunye noTaxonomy -I-DMP yakho kufuneka ibe neempawu ezahlukeneyo zesahluko sedatha kunye nohlalutyo. Kuya kufuneka ikwazi ukuseka uqoqosho, isakhelo sedatha esifana nomthi esichaza unxibelelwano phakathi kwamacandelo akho edatha. Iya kuvumela i-DMP ukuba ichaze amacandelo amancinci edatha, ihlalutye nzulu, kwaye ivavanye phezulu.
Ukudityaniswa kweCMS Elona nqanaba liphezulu le-DMP sisakhono sokuyidibanisa newebhusayithi yakho ye-CMS. Iya kukuvumela ukuba uguqule umxholo kwiwebhusayithi yakho kwaye uhlangane neemfuno zabasebenzisi bakho.
Imali -Emva kokuba udibanise i-DMP, kuyakufuneka ufunde ukuba ungayisebenzisa njani idatha yokwenza imali ngakumbi kumaqonga esecaleni (DSP). Kubalulekile ukuba ukhethe i-DMP enokuthi ihlanganiswe ngokulula kunye namaqabane akho ebango.
Ezinye ii-DSPs zibonelela nge-DMP yemveli, edityaniswe ngokuqinileyo kwinkqubo yendalo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-DMP edityaniswe kwi-DSP enye inokuba sisisombululo esisebenzayo, kuxhomekeke kwimeko yentengiso yakho kunye nomhlaba okhuphisanayo.
Ukuba usebenza kwimakethi encinci, apho i-DSP ethile ingoyena mdlali ubalaseleyo, usebenzisa i-DMP yabo yemveli kunokuba sisenzo esihle. Ukuba usebenza kwimarike enkulu, kuya kufuneka unike ingqalelo kwindlela ekulula ngayo ukudibana ne-DMP kunye namaqonga emfuno amakhulu.
Ukuhlanganiswa kweseva yentengiso Elinye inqaku elibalulekileyo kukukwazi ukusebenzisa idatha yakho. Uninzi lwabapapashi lisebenzisa iseva yentengiso ukusebenza ngokuthe ngqo neearhente kunye nabathengisi, ukumilisela imikhankaso yabo yentengiso, ukukhuthaza umnqamlezo, okanye ukuthengisa intengiso eseleyo. Ke, i-DMP yakho ifuna ukudibanisa ngokulula kunye neseva yakho yentengiso.
Ngokufanelekileyo, i-server yakho yentengiso kufuneka ilawule iiasethi zentengiso kuwo onke amaqonga akho (iwebhusayithi, usetyenziso lweselfowuni, njl.njl.) Kwaye utshintshise idatha kunye neCRM yakho, eya kuthi yona inxibelelane ne-DMP. Imodeli enjalo inokuyenza lula yonke indibaniselwano yentengiso, kwaye ikuvumele ulandele ngokucacileyo ukwenza imali. Nangona kunjalo, oku akusoloko kunjalo, kwaye kufuneka uqinisekise ukuba i-DMP isebenza kakuhle kwiserver yakho yentengiso.
Kubalulekile ukuba umboneleli wetekhnoloji oyikhethileyo athobele ubumfihlo behlabathi kunye nemigaqo yokhuseleko lwedatha. Nokuba ujolise ngokukodwa kwidatha evela kwintengiso yasekhaya, usengafumana abasebenzisi kulo naliphi na ilizwe.
Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele ubudlelwane bomnikezeli we-DMP kunye nabathengisi bendawo kunye namaqabane. Ukujoyina iziseko ezimanyeneyo kunye nentsebenziswano esekiweyo kunokwenza lula ukudityaniswa kwamaqonga akho kunye nokuhambisa ulungelelwaniso lokwenza iiasethi zakho zedijithali.
Kukwabalulekile ukuba ukhethe iqabane lobuchwephesha elinganikezeli kuphela ngenkqubo yokuzixhasa kodwa likwabonelela ngesikhokelo esisebenzayo, ingxelo kunye nothethwano. Ukhathalelo lwabathengi oluphezulu kukufuneka usombulule nayiphi na imiba kwaye ulungelelanise iindlela zakho zolawulo lwedatha.
tags: Ummangaliyongezaukukhangela indawo enqamlezileyoulawulo oludibene nabathengiukuqokelelwa kweenkcukachaUkulungiswa komxholo onamandlaIdatha yeqela lokuqalaukwenza imaliii-imeyile ezizezakhoekujoliswe kuyoKABLOOMidatha yomntu wesithathu
U-Elena Podshuveit liGosa eliyiNtloko leMveliso kwi-Admixer. Uneminyaka engaphezu kwe-15 yamava ekulawuleni iiprojekthi zedijithali. Ukusukela ngo-2016 linoxanduva lomgca weemveliso ze-Admixer SaaS. Ipotifoliyo ka-Elena ibandakanya ukuqala okube yimpumelelo, iiprojekthi zabathengisi abaphambili (uPhilips, uNestle, uFerrero Rocher, uKimberly-Clark, uDanone, iSanofi), izisombululo ze-SaaS, ukumiliselwa kwamasango akwi-Intanethi, kunye nokusetyenziswa kweselfowuni. U-Elena ubonisene nezindlu ezinkulu zopapasho kubuchwephesha bokwenza imali kwi-asethi yabo.
I-5 SaaS yoMthengi iphumelele ezona ndlela ziQhelekileyo